ကြက် သားအကြွပ်ကြော် ..သံပုရာကော်ရည်ဆမ်း
ကြက်သားကို အရိုးထုတ်၊ အသားကိုလွှာပြီ;လှီးပါ
အဲဒီအသားကို ဘဲဥတစ်ဝက် ၊ တရုပ်မဆလာ 1 ဇွန်း
ပဲငံပြာရည်အကြည် 1 ဇွန်း၊ဆား ဇွန်းတစ်ဝက်၊
သမအောင်နယ် ခဏ နှပ်ထား
ကော်မှုန်.အခြောက်မှာ အသားပြား ကိုဖိသိပ်
ဆီပူပူ မှာ ကြွပ်ရွ အောင် ကြော် ဆယ်ထား
ဒယ်အိုးတယ် ဆီထည်. ဆီပူလာရင် အဲဒီအရည်တွေထည်.မွှေပါ
Posted by onsaw336 NYO at 6:48 AM No comments:
ဒိန်ခဲ၊ထောပတ်၊ ငရုပ်ကောင်းမှုန်. ဆား ထည်. သမအောင်ရောမွှေ
ကြက်ဥပြုတ်ခွံနွှာ၊ မွှေထားတဲ. အာလူးနှစ်တွေနဲ.ကြက်ဥကို အုပ်မယ်။
ကြက်ဥနှစ်လုံးခေါက် ထားမယ်။ကြက်ဥအာလူးလုံးကို ကြက်ဥရည် ထဲနှစ် ဆီပူပူ မှာထည်.ကြော်။
Posted by onsaw336 NYO at 6:46 AM No comments:
chicken pickel( kyeat thar thanut)
တုံးပြီါ် ချိုမှုန်. ဖြူးနယ်ထား
ဆီပူရင် ထောင်းထားတာတွေထည်. မွှေးအောင်ဆီသတ်မယ်။
နှမ်းဖြူး ဆီပြန်လာရင် ကြက်သွန်မိတ်ဖြူး
Posted by onsaw336 NYO at 6:43 AM No comments:
bean ( pae pyoke )ပဲပြုတ်
10 နာရီ (အွန်စောကတော. 1ညလောက်စိမ်တယ်)
ပဲတွေကို ဆန်ခါ (အပေါက်ပါတဲ့)မှာ 2ရက်လောက်ထားပြီး
ပဲနို.ဆီ2ဘူးဆိုရင် ဆော်ဒါကို တီးစပွန်း2စွန်းလောက်ထဲ.ပါ။
နောက်တစ်နေ. ထမင်းကြော် စား
Posted by onsaw336 NYO at 6:40 AM No comments:
curry rice (pork or chicken) steam
မုံလာဥနီ (ကယ်ရက်) အတုံးလှီးထား
ဂေါ်ဖီ လှီး၊ ပန်းပွင်. (ကယ်ဘေ.) ၊ လီးထား
ငုံးဥပြုပ်၊ အသားလုံး လုပ်ထား
ကြက်သွန်နီ။ဖြူ ဂျင်းနဲနဲ ထည်. ဆီထည်. မနွမ်းခင် သီးရွက်ထည်.
ရေနဲနဲ. ကော်ရည် စသည်ထည်.ချိုမှုန်. ဆား ပဲငံပြာရည် ကြည် နောက်
အသီးတွေမနွမ်းခင် ထမင်းပန်းကန် မှာ ပူပူလေးထည်.စားပေတော.
ငုံးဥအသားလေးတွေထည်. မွှေးချင်ရင် တရုပ်မဆလာခပ်
Posted by onsaw336 NYO at 6:30 AM No comments:
kyae owe (ကြေးအိုး) chinese .myanmar food
၀က်ရိုး၊ ၀က်သား (ကြိတ်ပြိးသား)၊ ၀က်သဲ၊ ကြောက်ကပ်၊ ငါးလုံး၊ ငုံးဥ၊ မုန်ညင်းး၊ တရုပ်မျက်၊ ...စသည်တို့လိုအပ်ပါသည်
၀က်ရိုးကို ရေစင်အောင်ဆေးပြီးပြုတ်ပါ။ ၁၅-၂၀ မိနစ်လောက်ကြာရင် ပြုတ်ထားတဲ့ ၀က်ရိုးကို ရေသွန်လိုက်ပါ။ ရေအသစ်ထည့်ပြီး မီးနွေးနွေးလေးနဲ့ ပြုတ်ပါ။ ဆား သင့်တင့်အောင်ထည့် ပါ။ သကြားအနည်းငယ်ထည့် ပါ။ ( အချိုမှုန့် မသုံးလိုသူများတွက် သကြားက သင့်တော်ပါတယ်)
၀က်သားကြိတ်ထားတဲ့ အထဲကို ကော်မှုန့် ၊ ကြက်ဥတလုံး၊ ကြက်သွန်နီကြော် အမှုန့် ထောင်း၊ ကြက်သွန်ဖြူကြေ်ာ်မှုန့်၊ ပုဇွန်ခြောက်မှုန့်၊ ငရုပ်ကောင်း၊ ဆား၊ ပဲငံပြာရည်၊ ငံပြာရည်ထည့် ပါ။ သမအောင်မွေပြီးသွားရင် ၀က်သားပြုတ်ထားတဲ့အထဲကို အလုံး အလုံးလေးတွေ လုပ်ထည့် ပါ။ ရေပေါ် ပေါလော ပေါ်လာရင် ပြန်ဆည်ပါ။
၀က်အသဲကို ရေစင်အောင်ဆေးပါ၊ ပြီးရင် အတုံး အရွယ်တော်လေးတုန်းပြိး ဆားနယ်ပါ။ ပြီးရင် ၁၀-၁၅ မိနစ်လောက်ပြုတ်ပါ။ (၀က်သည်းက ကြာကြာပြုတ်ရင် မာသွားတတ်ပါသည်) တရုပ်မဆာလာ ကြိုက်ရင် တပွင့် နှစ်ပွင့် လောက် ထည့် ပြုတ်ပါ။
ကြောက်ကပ်ကို ဆီးကြောလေးတွေ စင်သွားအောင်လှီးထုတ်ပါ။ ပြီးရင် ဆား၊ ဘေကင်ဆိုဒါနဲ့နယ်ဆေးပါ။ သံပုရာသီးနဲ့ လဲဆေးလို့ ရပါတယ်။ အနံ ပြောက်သွားလောက်တဲ့ ထိဆေးပြီးရင် တရုပ်မဆလာပွင့်နဲနဲ နဲ့ပြုတ်ပါ။ ( ကြောက်ကပ် အနံ့သည် အနည်းငယ် ပြင်း သဖြင့်မကြိုက်တတ်ရင် မလုပ်စားပါနဲ့)
အဲ ဆံကြာဇံကိုလဲ ရေစိမ်ထားပါ။
မုန်ညင်းကို ရေစင်အောင်ဆေးပြီး။ အရွယ်တော် ချိုးပါ၊
တရုပ်မျက်ကိုလဲ ဆေးကြီး။ ခပ်ရှည်ရှည် လှီးးပါ။
အိုးသေးလေးထဲကို ၀က်ရိုးပြုတ်ရည် တပန်းကန်စာ။ ကြာဇံ နည်းငယ်ထည့် ပြုတ်ပါ။ အသည်း ကျောက်ကပ် အသားလုံး ငါးလုံးနဲ့မုန်ညင်းတို့ ကိုထည့် ပြုတ်ပါ။ ငုံးဥပြုတ်ထည့် ပါ၊ အချို အငံ မြည်းပြီး လိုသလို ပြင်ပါ၊ ရပြီဆိုရင် တရုပ်မျက်နဲနဲ၊ နှမ်းဆီလေး လေးစက်လောက်နဲ့ငရုပ်ကောင်း နဲနဲ ထည့် ပါ။
Posted by onsaw336 NYO at 6:27 AM No comments:
noodle (si kyete) myanmar.chinese
ကြက် ၊၀က်၊ဘဲ ကြိုက်ရာ....ပြုတ်ထား...အသားနွာ..သေးသေးလှီးထား
ကြက် သွန်ဖြူ ဆီချက်၊ပဲငံပြာရည်သင့်ရုံ၊ဟင်းချိုမှုန်.ထည်.ပြီါ်ခေါက်ဆွဲရေနွေးဆူဆူ ထည်. ဆယ်ပြီးပန်းကန်ထဲထည်.
ကြက်သွန် မိတ်ခပ်လိုက် အရိုးပြုတ်ရည်နဲ.သောက်
Posted by onsaw336 NYO at 6:25 AM No comments:
Song hae kyo
coconut noodle (ong no kaug swae)myanmar